Abavelisi abaPhathekayo kunye nabaXhasi - iFektri yaseTshayina ephathekayo
I-BA200 ephathekayo uhlalutyo oluhlaza oluhlaza
Isicazululi esine-algae eluhlaza okwesibhakabhaka kunye noluhlaza siqulathe umgcini ophathwayo kunye nesixhobo sokubamba ulwelwe oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokusebenzisa uphawu lokuba i-cyanobacteria ine-absorption peak kunye ne-peission peak kwi-spectrum, ikhupha ukukhanya kwe-monochromatic yobude obuthile emanzini. I-cyanobacteria emanzini ifunxa amandla okukhanya kwe-monochromatic kwaye ikhulule ukukhanya kwe-monochromatic kolunye udweliso lobude. Ukukhanya kokukhanya okukhutshwa luhlaza okwesibhakabhaka kunye nokuluhlaza kuyalingana nomxholo wecyanobacteria emanzini.
I-CH200 i-chlorophyll ehlalutyiweyo
Isicazululi seChlorophyll esiphathwayo siqulathe umgcini ophathwayo kunye nesixhobo esichaphazelayo se-chlorophyll. yamandla okukhanya kunye nokukhupha enye inqanaba lokuphakama kobude bokukhanya kwe-monochromatic, i-chlorophyll, amandla okuphuma ayalingana nomxholo we-chlorophyll emanzini.
I-CON200 yokuPhatha ngokuSebenza / i-TDS / iMitha yetyuwa
Umvavanyi we-CON200 ophethe ukuhambisa ngesandla uyilelwe ngokukodwa ukuvavanywa kweeparameter ezininzi, ukubonelela ngesisombululo esimiselweyo sokuqhuba, i-TDS, ityuwa kunye novavanyo lobushushu. Iimveliso zoluhlu lwe-CON200 ezinengqiqo kunye noyilo olusebenzayo ukusebenza okulula, imisebenzi enamandla, iiparameter zokulinganisa ezigqibeleleyo, uluhlu olubanzi lokulinganisa;
I-DH200 ephathekayo ichithwe imitha yeHydrogen
Iimveliso zothotho lwe-DH200 ezinengqiqo kunye noyilo olusebenzayo; ephathekayo i-DH200 inyibilikise imitha ye-Hydrogen: Ukulinganisa i-Hydrogen Amanzi atyebileyo, Ukunyibilika koxinzelelo lweHydrogen kumvelisi wamanzi weHydrogen. Kananjalo iyakwenza ukuba ulinganise i-ORP emanzini e-electrolytic.
I-DO200 ephathekayo inyibilikile Imitha yeoksijini
I-DO200 sisixhobo sakho sovavanyo lobuchule kunye neqabane elithembekileyo kwiilebhu, iindibano zocweyo kunye nomsebenzi wokulinganisa imihla ngemihla wezikolo.
I-LDO200 ephathekayo ichithwe iOxygen Analyzer
Izixhobo zeoksijini ezinyibilikisiweyo eziphathekayo zibunjwe yintloko ye-injini kunye ne-fluorescence inyibilike i-oxygen sensor. Inkqubo ye-fluorescence ehambelanayo yamkelwe ukumisela umgaqo, akukho membrane kunye ne-electrolyte, ngokusisiseko akukho londolozo, akukho tyenziswa kweoksijini ngexesha lokulinganisa, akukho zinga lokuhamba / iimfuno zokuphazamiseka; Ngomsebenzi wembuyekezo wobushushu be-NTC, iziphumo zomlinganiso zinokuphindeka okuhle kunye nozinzo.
PH200 ephathekayo PH / ORP / lon / Meter Temp
Iimveliso zechungechunge lwe-PH200 ezinengqiqo kunye noyilo olusebenzayo
I-PH200 sisixhobo sakho sovavanyo lobuchule kunye neqabane elithembekileyo kwiilebhu, iindibano zocweyo kunye nomsebenzi wokulinganisa imihla ngemihla wezikolo.
I-TSS200 ePhathekayo isiHlahli seSolid esirhoxisiweyo
Izinto eziqinileyo ezinqunyanyisiweyo zibhekisa kwinto eqinileyo enqunyanyisiweyo emanzini, kubandakanya izinto ezingaphiliyo, izinto eziphilayo kunye nesanti yodongwe, udongwe, ii-microorganisms, njalo njalo. Umxholo omiselweyo emanzini yenye yeesalathiso zokulinganisa inqanaba lokungcoliseka kwamanzi.
I-TUR200 Isicoci seThubhu ephathekayo
Umbane oshushu ubhekisa kwinqanaba lokuthintelwa okubangelwe sisisombululo sokudlula kokukhanya. Ibandakanya ukusasazeka kokukhanya ngento enqunyanyisiweyo kunye nokufunxwa kokukhanya ziimolekyuli. Ubunzima bamanzi abuhambelani kuphela nomxholo wento enqunyanyisiweyo emanzini, kodwa ikwahambelana nobungakanani bayo, ukumila kunye nomlinganiso wokutsalwa wokutsala.
TUS200 ephathekayo Turbidity Tester
Ukuvavanywa kobunzima obuphathekayo kunokusetyenziswa ngokubanzi kumasebe okhuselo lokusingqongileyo, amanzi etephu, ilindle, unikezelo lwamanzi kamasipala, amanzi emizi-mveliso, iikholeji zikarhulumente kunye neeyunivesithi, ishishini lamayeza, ezempilo kunye nolawulo lwezifo kunye namanye amasebe wokumiselwa koxinzelelo, hayi kuphela ebaleni kunye novavanyo olukhawulezayo lomgangatho wamanzi kwindawo, kodwa kunye novavanyo lomgangatho wamanzi elebhu.
Ph woluvo Electrode, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Isilumko seChlorophyll, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Isilumko sokuSebenza kweTitanium,